Wasiir ka tirsan Denmark oo iska casilay Xilkiisa
HomeWararka DenmarkWasiir ka tirsan Denmark oo iska casilay Xilkiisa
May 2, 2022 Wararka Denmark, Wararka Maanta 0
Foto: Jonas Ekstromer / AFP/NTB
Wasiirka caddaaladda ee Danmark Nick Hækkerup ayaa dawladda ka tagaya, si uu u noqdo agaasimaha ururka ganacsatada deenishka
54-sano jir ka tirsan xisbiga S ayaa horay u soo noqday wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka caafimaadka. Waxa uu ahaa Wasiirka Cadaaladda ilaa 2019-kii.
– Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa in xisbiga Sooshal dimuqraadiga sannadihii oo dhan uu i siiyay fursad aan isbeddel ku sameeyo oo aan u dhaqaajiyo jihadii aan u soconay ayuu ku soo qoray Facebook.
-In ka badan 20 sano waxaan ahaa siyaasi waqti buuxa ah, maayar, xildhibaan iyo wasiir, waxaana la gaaray waqtigii aan dadaal ka sameyn lahaa dhinacyo kale, ayuu qoraalkiisa sii raaciyay.
Aabihii iyo awoowgii Hækkerup ayaa iyaguna wasiir ka ahaa Danmark. Mid ka mid ah ficilladii ugu dambeeyay ee Hækkerup ee wasiirka caddaaladda ayaa todobaadkii hore saxeexday heshiis muran dhaliyay, oo Danmark ka kiraynayso 300 oo xabsi oo Kosovo ah maxaabiista lagu xukumay masaafurinta. Baarlamaanka weli ma ansixin heshiiska.
Wuxuu qaban doonaa jagada agaasimaha Ururka Brewers’s 1 June. Marka laga soo tago in uu iska casilayo xilka wasiirnimo, waxa uu sidoo kale iska casili doonaa xubinimada baarlamaanka.
Doorashada soo socota ee baarlamaanka waxa la qaban doonaa ugu dambayn 4 June 2023.